Somaliweyn Way Kala Leedahay Dalalka | Somaliland Post
Shirkadaha Diyaaradaha Caalamka oo Baafinaya Goobo Parking ah oo la dhigo…
Dowladda Ethiopia oo Xaalad Deg-deg ah Gelisay Dalkeeda iyo Go’aamo Saamayn…
Home Maqaallo Somaliweyn Way Kala Leedahay Dalalka
Qalinka Ibrahim Hassan Gagale
Dad badan ayaa la yaabay ama ka xumaaday markii dhawaan Sucaad Carmiye dood ka sheegtay in Afarta kale ee Somaliyeed ay Somaliland ka yihiin AJANEBI. Sucaad waa sax. Bal hadda eeg dalalka Carabta ah ee ku qoran maaamka hoos ka muuqda. Dhammaan dalalkaas waxay ka xoroobeen gumaysi marka laga reebo Falastiin.
Sida Somalida, Dalalkan Carbeed waa isku Diin, Af, Dhaqan, caado iyo midab. Qaranimada iyo aqooonsiga dalkasta oo dalalkan Carbeed ka mid ah waxay ku salaysantahay xuduuudii u gumaysigu qayday.
Qofka u dhashay dal Carbeed oo gaar ah ma tegikaro dal kale oo Carbeed isaga oo aan sharci ku soo gelin waayo waxaa uu ka yahay Ajanebi. Tusaale, ninka Reer Jordan ah ma gelikaro dalka Masar hadddii aanu ku soogelin Baasaboor iyo Fiise Sharci ah sababta oo ah waxaa uu ka yahay Ajanebi. Xataa jago kama qabankaro Masar sababta oo ah maaha muwaadin Reer Masar ah. Dhammaan dalalkan Carbeed waxaa midkastaba midka kale ka yahay Ajabeni.
Somaliduna waa sidaas oo kale in kasta oo ay yihiin isku Af, Diin, dhaqan, caado iyo midab. Ma jirto waxay ku kala duwanyihiin Somalida iyo Carabta. Sidaan Carabweyn loogu gelikarin dalkasta oo Carbeed ayaan Somaliweyna lagu gelikarin dalkasta oo Somaliyeed. Qofka u dhashay Jabuuti, Somalia, Waqooyi Bari Kenya iyo Somali Galbeed waxa ay Somaliland ka yihiin Ajanebi sababta oo ah uma dhalan, markaas waa inay ku galaan sharci. Midkastana waa sidaas oo kale oo Jabuuti iyo kuwa kaleba waxaa lagu galaa sharci marka laga reebo Somalia oo noqotay dal aan la kala lahayn iyo raq qofkastaba cuno hilibkeeda. Maxay Somaliland iyo Somalia uga duwanyihiin Somalida kale? Ma jirto waxay uga duwanyihiin sababta oo ah midna waxaa gumaysanjiray Ingiriis, midka kalena waxaa gumaysanjiray Talyaaniga.
Dadkii ku mamay Somaliland 30kii sano ee ay ku jirtay midnimo ku-sheegii laga dhaxlay dulmiga, xasuuuqa iyo iska-horkeenka ayaa maantana raba inay xukumaan kana maalaystaan dhul ama dal aanay u dhalan. Haddii aan Somalia la kala lahayn, dalalka kale ee Somalida waa la kala leeyahay. Masar iyo Suuuriya ayaa midoobay sannadkii 1958 waxayna la baxeen “Jamhuuriyadda Carabta” waxayna kala tageen, sida Somalia iyo Somaliland, sannadkii 1961. Figradda Somaliweyn waxay la mid tahay Carabweyn lamana garanayo samanka ay rumoomibidoonaan.